DHEGEYSO-Duubabka gobolka Hiiraan oo eedayn u jeediyey dowladda federalka ah. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Duubabka gobolka Hiiraan oo eedayn u jeediyey dowladda federalka ah.
Luulyo 10, 2016 4:32 b 0
(July 10 2016)-Duubabka-dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa qaadacay habka loo maamulayo hanaanka doorasho ee Somalia, iyagoo dhinaca kale ku eedeeyay dowladda federaalka ay fara galin ku hayso soo xulista xildhibaanada ka soojeeda Gobolka Hiiraan.
Dhanka kalena wararka ka imaanaya Magaalada Baledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in maanta Wafdi ka socda Urur Goboleedka IGAD ay tagayaan Magaaladaasi Baledweyne.
Nababadoon Dacar Xirsi oo kamid ah nabadoonada gobolka Hiiraan ayaa arrimahaasi uga waramay Subeer Sheekh Cabdi oo kusugan Daljir Galkacyo.